I-Growers Cottage, i-Lower Mangrove NSW - I-Airbnb
I-Growers Cottage, i-Lower Mangrove NSW
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguPascale
Le ndlu yabalimi bokuqala ibuyiselwe ngothando, imiswe phakathi kweDharug National Park, ixhotyiswe ngokupheleleyo, iyindawo efihlakeleyo yezibini ezitshatileyo.
I-cottage ijikelezwe yigadi yabalimi yeziqhamo kunye nemifuno esitsha, eyakho ukuba uyivune kwaye uyonwabele.
I-Growers Cottage yindawo yokuphumla, ukufunda, ukubuyisela kwaye ukonwabele izandi ezizolileyo zendalo. Yonwabela yonke indlu yaBalimi ekufuneka ibonelele, kubandakanya nelitye elimangalisayo lokuhlambela ngaphandle okanye uphume kwaye ujonge ummandla ojikeleze i-Hawkesbury.
I-Growers Cottage yindlu yokulala evulekileyo yeplani ekwi-25 yeehektare zomhlaba ehleli ngaphantsi kwePaki yeSizwe.
Indlu encinane ijikelezwe yimithi yeziqhamo emininzi; ama-apile, iilamuni, iilamuni kunye nemithi yamapere ukukhankanya ezimbalwa. Imifuno ikhuliswe ngaphandle komnyango kwaye siya kukwazisa ukuba yintoni evuthiweyo kwaye ilungele ukutyiwa xa uhlala!
Relax phambi komlilo welog ebusika okanye ujabulele ukufudumala kwehlobo kunye ne-air-conditioning ngaphakathi, kunye neembono ezintle zeentaba ezingqongileyo.
Konwabele ukuhambahamba ujikeleze ipropathi, khetha imifuno ekwixesha lonyaka kwaye upheke isidlo. Thatha i-cottages tandem bike ukukhwela kwaye ujabulele ipiknikhi kumasimi ajikelezwe yindalo. Relax kwibhafu yangaphandle entle eqinileyo ejonge iintaba ezijikelezileyo. Yitshise ioveni yepizza yangaphandle kwaye upheke iipizza ezimnandi, okanye upheke ukutya kwakho kwiWeber BBQ kwaye emva koko uhlale ujikeleze umngxunya ongaphandle wentsimbi kwaye uthobe iimarshmallows! Yonwabela ulala obukufanelayo kumandlalo wethu omhle "we-Koala" ogqunywe phakathi kwamaphepha agqwesileyo kwihlabathi, ilinen ye-Eucalyptus ye-fiber etofotofo ye-Koala!
I-Lower mangrove yindawo entle efihlakeleyo kwaye ekhuselweyo eyindawo entle yokutyelela, ilitye elifihliweyo lokwenyani elikufutshane kakhulu eSydney (phantsi kweyure ngemoto ukusuka eHornsby)
Eyona 'venkile' ikufutshane neLower Mangrove iseSpencer, umgama wemizuzu eli-10 xa uqhuba, ivulwa iintsuku ezi-6 ngeveki ngaphandle kweLwesibini kwaye inamalungiselelo asisiseko, yenza i-scone entle kunye nejam kunye neebhega ezinkulu - kungcono ukuzisa. zonke iimpahla zakho kunye nawe kwizidlo oceba ukuba nazo ekhaya. Elona ziko lokuthenga likufuphi liseGosford ekumgama wemizuzu engama-45 ukuze ufike uzilungiselele!
Idolophu yaseWisemans Ferry inendawo yokuthengisa yamatye endala entle kwaye ukuhamba kwakho apho kumnandi kuphele ngohambo lokukhwela inqwelo moya yaseWisemans (simahla) ukuwela umlambo ukuya edolophini. I-Wisemans Ferry ikwayindawo elungileyo yokuchola ukutya okongeziweyo/utywala obusele ukuba uye waphelelwa!
KwiNtaba yeMangrove, ibala legalufa laseSprings linendawo yokutyela enkulu kunye nebala yegalufa ekufanele ukutyelelwa.
Endleleni eya kwi-cottage kukho abalimi abaninzi bendawo apho ungathenga khona iziqhamo kunye nemifuno ephilayo, kunye neebhokisi ezininzi zokunyaniseka ecaleni kwendlela apho ungathenga khona imveliso entsha yonyaka.
Silandele ku-Instagram - @thegrowerscottage
I-cottage iku-250m kude nendlu enkulu kwipropathi kwaye ijonge kwelinye icala - ibucala ngokupheleleyo.
Rhoqo siseSydney ke yonke indawo iya kuba yeyakho ukuze uyonwabele. Ukuba sikhona siyayihlonipha ngokupheleleyo indawo yakho kunye nobumfihlo, nangona kunjalo wamkelekile ukuba uze kwindlu enkulu ukuba ufuna nantoni na okanye ubuze nayiphi na imibuzo.
Rhoqo siseSydney ke yonke indawo iya kuba yeyakho ukuze uyonwabel…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-676-2
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lower Mangrove